$ 5,000 Abaalmarin Lacageed ExpressVPN Mustaqbalka Deeqda Asturnaanta 2020 2022
$ 5,000 Cash Prize ExpressVPN Mustaqbalka deeqda waxbarasho ee asturnaanta 2020
ExpressVPN waxay abaalmarinaysaa mustaqbalka maalgalinta asturnaanta ee ardayda shahaadada koowaad, qalin-jabinta, iyo ardayda dugsiga sare sameysa dalalka ugu caansan adduunka.
Abaalmarinta waxaa loogu talagalay in kor loogu qaado wacyiga macluumaadka gaarka ah ee internetka iyo amniga. Waa fursad lagu noqdo hogaamiyaha codka dooda sii kordheysa ee la dagaalanka sirta, xuquuqda dijitaalka, asturnaanta internetka iyo faafreebka.
ExpressVPN waxay diyaar ka dhigeysaa isku xirnaan deg deg ah iyo marin aan la hubin oo lagu heli karo bogagga iyo adeegyada adduunka oo idil. Shirkaddu waxay ku taal Jasiiradda British Virgin Islands waxayna shaqeyneysay illaa 2009.
Jaamacad ama Urur: ExpressVPN
Heerka Koorsada: Dugsiga Sare, Shahaadada Koowaad, Qalinjabinta
Award: $ 5,000 oo abaalmarin lacageed
Tirada Abaalmarinta: 1 guuleyste iyo shan kaalinta labaad
Jinsiyada: US, UK, EU, Canada, Australia, New Zealand, Muwaadin Koonfur Afrika ah
Abaalmarinta waa la qaadan karaa USA, CA, UK, EU, NZ, AU, iyo SA
Dalalka u Qalma: Mareykanka, Kanada, Boqortooyada Ingiriiska, Midowga Yurub, Australia, New Zealand, ama Koonfur Afrika
Koorso La Aqbali karo ama Maado Kafaala-qaadka waxaa la siin doonaa dugsiga sare, shahaadada koowaad, ama koorsooyinka daraasadda qalin-jabinta maaddo kasta.
Si aad ugu qalanto, codsadayaashu waa inay la kulmaan dhammaan waxyaabaha soo socda:
Codsadeyaashu waa inay hadda iska diiwaangeliyaan dugsi sare, dugsi hoose, ama dugsi qalin jabiyay oo lagu meeleeyo Boqortooyada Ingiriiska, Mareykanka, Kanada, Australia, Midowga Yurub, New Zealand, ama Koonfur Afrika.
Ma jiraan shuruudo da 'ama jinsiyad.
Shaqaalaha ExpressVPN iyo xubnaha qoyskooda uguma qalmaan tartankan.
Sida loo Codso: Si aad u gasho tartanka deeqda, qor qormo jawaab ah (600 illaa 800 erey) jawaabta:
In kasta oo asturnaanta badanaa loo aqoonsan yahay inay tahay xuquuqda aadanaha, carruurta yar yar ayaa had iyo jeer awood u lahayn inay sameeyaan xulashooyin ay ku difaacayaan xuquuqdaas. Tusaale ahaan, dhallaanka wax talo ah kuma lahan in waalidkood ay sawiradooda ku dhajiyaan Facebook.
Ilaa xad intee le'eg ayay waalidku xor u yihiin inay ku gaaraan go'aannada saamaynaya asturnaanta iyaga oo ka wakiil ah carruurtooda? Maxaa dhacaya (haddii ay jiraan) tallaabooyin cusub oo aad u malaynayso in dawladaha ama ganacsiyada internetka ay tahay inay dejiyaan si loo ilaaliyo xuquuqda carruurta yaryar ee u gaarka ah?
Codsadeyaashu waa inay ku soo diraan qoraalkooda emayl kaliya deeq waxbarasho@expressvpn.com. Si waxtar u yeelato, emaylka soo gudbinta waa inuu ku jiraa faahfaahinta soo socota: 1) Magacaaga, 2) Magaca dugsiga, cinwaanka, iyo faahfaahinta xiriirka, 3) Heerkaaga fasal ee hadda
Taageerida Dukumentiyada: Waa inuu soo gudbiyaa aqoonsi ansax ah iyo cadeynta isqorista dugsiga sare, dugsiga hoose, ama dugsiga qalin jabinta
Shuruudaha Gelitaanka: Hal gelitaan ardaykiiba. Qormada waa in lagu qoro Ingiriis.
Shuruudaha Luqadda: English
Ku guuleystaha deeqda waxbarasho ee 2020 wuxuu helay $ 5,000 abaalmarin lacageed.
ExpressVPN sidoo kale waxay doorataa shan kaalin sare, kuwaas oo heli doona hal sano oo ExpressVPN ah.
Maxaad u galaysaa Ku guuleystaha waxaa lagu soo bandhigi doonaa dhowr barnaamijyo isgaarsiineed. Waa dib-u-dhisaha ugu wanaagsan ee xirfad u leh saxaafadda, sharciga, sayniska kombiyuutarka, ama qayb kasta oo daraasad ku habboon.
ugu dambaysa ee arjiga: Ogosto 31, 2020, ugu dambayn 11:59 pm, Waqtiga Baasifiga.
Deeqaha Australia Deeqaha Canadianka Deeqaha Yurub Deeqaha New Zealand Deeq waxbarasho oo diblooma ah Koonfur Afrika Deeqaha Deeqaha UK Ka hooseeya Deeqaha waxbarasho Deeqaha waxbarasho ee Mareykanka Shahaadooyinka Maraykanka
Previous Post:Jaamacadda Golpayegan ee Deeqda Teknolojiyada ee Ardayda Caalamiga ah ee Iran, 2020
Post Next:Fulinta Dhaqaalaha Helay Bangiga Dhexe ee Afrika MPhil Degree deeq waxbarasho ee UK 2020